Elementary Os Luna, pakupedzisira akatsiga! Ongorora | Kubva kuLinux
Elementary Os Luna, pakupedzisira akatsiga! Ongorora
Aive akapfeka Lubuntu mazuva ano anofara chaizvo, kunze kwekumwe kukanganisa kwandakaita nekuendeswa kweimwe chirongwa windows.
Ini ndinopedzisira ndapinda Google+ Uye ndinorangarira chiziviso chekuti pamwe chaizobuda Elementary OS akatsiga. Ini ndinoenda pawebhu uye ini ndatoiwana iyo ISO. Ndinoiburutsa pasi ndoiyedza paLive CD
Pakutanga tinowana iyo Desktop Nharaunda, yakachena, yakanaka uye yakapusa, yakafanana chaizvo neiyo ye Mac OSX.
Parizvino zvese zvakanaka pane live cd, kusvikira iwe waona kuti yako Hardware haina kunyatsotsigirwa neKernel 3.2 uye tafura 8, saka ndakatanga kuisa distro ndobva ndashandisa xorg edgers ppa kuve netafura yekupedzisira, uye Kernel 3.11 kubva papa ye Ubuntu Kernels.
Kana izvi zvese zvaitwa, ndakafunga kutanga ongororo yenzvimbo nhanho nhanho, isu tichatarisa kune yega yega mafomu
4 Mafaira (Phanteon Mafaira):
6 Menyu yekushandisa:
7 Sarudzo dzesystem:
8 Software Center:
Iyi inotaridzika inotaridzika app, yakafuridzirwa neTunes Iyo inotipa iyo yechinyakare 3 yekuona modes, nezvivharo, rondedzero modhi uye "maartist, genre, maalbum" maitiro.
Iko kunyorera kuri nyore, kunotipawo kuwiriranisa neLastFM uye parizvino hapana chinhu chitsva icho Banshee, Rhythmbox, Clementine, Amarok, Audacious ...
Mukuyedza kwangu iyo app zvakavanzika zvakapunzika kekutanga kaviri ini ndaida kumisikidza dambarefu remumhanzi, kechitatu yaive runako.
Kuvapo kwemawairesi, akadai seShoutcast, Icecast, pamwe neiyo irikutamba plugin yeEmpathy inoshaikwa.
Chekutanga pane zvese, ini ndinonyatsoda chimiro chepamusoro chematai echirongwa, zvinondiyeuchidza zvakawanda zveMessage application kubva kuna Osx.
Ini ndakanyatso kurongedza mifananidzo yeemaimeri emaGmail, ayo asina kushanda zvachose mushe muKMail.
Dambudziko nderekuti pavanobva pakuve vashoma, ivo vakanganwa chimwe chinhu kwandiri chinonyanya kudikanwa. Ndiri kutaura nezvekutsvaga maemail, kutsvaga mazwi, zvemukati, mazuva, nezvimwe. Hazvina kunyatsogadzikana kutsvaga meseji kubva mugore ra2012 usina bhokisi rekutsvaga.
Kamwe zvakare kutaura kuti iyo vhezheni yeMidori granite inotaridzika chaizvo kubudirira, iyo yekufambisa iri chaizvo mvura uye ini handina kutambura kusatarisirwa kuvharwa sezvo zvinowanzoitika kwandiri nemabhurawuza anoenderana ne qtwebkit
Asi zvakare, kunyangwe kuteedzera posvo kubva kune Elementary vakomana, ini handina kukwanisa kuwana flash kuti ndishande mune ino browser (64-bit). Saka yaingova imwe Internet Explorer yakandibatsira kurodha pasi Chrome.
Mafaira (Phanteon Mafaira):
Ini ndainyanya kufarira chirongwa ichi, chinoita izvo zvinodikanwa, ine mhando nhatu dzemhando dzekare dzekuona, dhairekodhi modhi, runyorwa etc. Inoita izvo zvakaringana uye zvakafanira izvo zvinoda mushandisi, kwete zvakanyanya kana zvishoma. Kunaka kwayo kunondiyeuchidza zvakawanda zveiyo OS X faira maneja, asi mune ino kesi, kuve wakareruka zvakanyanya.
Saka +1 yeapp iyi.
Mune ino kesi, ini handigone kupa yakatarwa pfungwa, handisati ndamboshandisa idzi mhando dzekushandisa, saka kusvika nhasi handisi kunyatsonzwisisa kuti vangandibatsira sei.
Kubudirira chaiko, uchienzaniswa neGnome Shell, sezvo pasina chikonzero chekuve nemenyu inozadza iyo skrini yese. Isu tine mukana wekuona zvakarongedzwa nearufabheti, pamwe nemukana wekunyorwa nemhando dzekushandisa.
Iko hakuna zvakawanda zvekutaura nezve izvi, ikopi yeiyo imwechete Ubuntu application iyo yaive ichiteerana ichibva pane imwechete kubva kuOS X. Chaizvoizvo zvakafanana, inozadzisa basa rayo uye chinhu chega chandinosuwa ndechekuti chinonditendera kuti ndisarudze kana kuisa mafolda pane desktop. Izvo zvandakagadzirisa neGnome Tweak Zvishandiso.
Ini ndaifunga kuti tichazopedzisira tawana hub nyowani yavakazivisa, asi pakupedzisira ndakazongoona imwechete Ubuntu software hub.
Kupedzisa kutarisa uku pamusoro peiyo distro, tinogona kupedzisa kuti iri nyore, yakachena, yakagozha yekuparadzira inoedza kubata mushandisi achipa maitiro maquero, asi izvo zvinotambura nezvinhu zvitatu zvinogumbura:
Zvimwe zvekare mapakeji esoftware, ayo anoda kushandiswa kwePPA, zvese muKernel uye muMESA, pamwe neakakosha Libreoffice-senge mafomu.
Libmutter 3.4 haina kupukutwa sa3.8, iyo inopa yakaderera magiraidhi kuita kupfuura zvayaigona dai yaive yakavakirwa pane chimwe chinhu chiri kumusoro-ku-zuva.
Izvo zvinoshandiswa zvakapusa uye zvinoshaya zvinhu izvo vazhinji vanofunga zvakakosha.
Zvishoma zvishoma kweinopfuura gore nehafu yekusimudzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Elementary Os Luna, pakupedzisira akatsiga! Ongorora
Fuck! Wakafambira mberi kwangu 🙂
Nekudaro, iyo Ongororo yakanaka kwazvo kungova kuravira. Ini ndinobvumirana newe kuti zvinhu zvakapusa zvinogona kutsamwisa. Iwe unotaura Geary (inova nenzira inonyadzisa kuti haina rutsigiro rwePOP3), asi chinhu chimwe chete ichi chinoitika neManaja File. Ini ndasuwa chaizvo kugona kutsvaga magwaro uye vamwe kubva kune imwecheteyo application, zvakare, ini handirangarire kuti eOS ine chishandiso chayo.
Karenda inotonhorera, asi ine dambudziko (kanenge kekupedzisira ndichiyedza), haina kukuzivisa nezve zviitiko zvako, saka kana ukasaivhura, hapana kana chaunoziva.
Midori achiri nechimwe chinhu chandisingade. Uye ini handizive mune yakagadzika vhezheni, asi muBeta pandakaiyedza, ini handina kufarira kuti modal dialogs ari kana ane akafanana iwo maitiro seGNOME.
Kunze kweizvi, iko kwakakurudzirwa kugovaniswa kwevashandisi vatsva. Nenzira, kuongorora kwako kwekupedzisira kwakandipa zano 😛
Maonero angu akapfupikiswa chaizvo mumutsara wekupedzisira waFranchesco:
"Zvishoma zvishoma kweinopfuura gore nehafu yekusimudzira"
Makorokoto angu kuElementary Team asi pakupedzisira, isu taitoziva zvaive kunze uko uye hatina kushamiswa nekuvhurwa uku.
Pindura kuna Yoyo
Javier Fernandez akadaro
Ndakanga ndanyadziswa mushure mekufungidzira kwekutanga, ndaive nezvakawanda zvandaitarisira neiyi distro, asi seyese ndinoifarira kushamwari dzangu / vatengi vasingazive chero chinhu nezvemakomputa, zvirinani zviri nyore, rakasununguka bhokisi rakavhurika raisazove ravo kunyangwe zvaizove zve ini. 🙂
Pindura Javier Fernandez
Zviri nyore, zvakapusa, zvekuti pane "chimwe chinhu" chisipo. Kwandiri idiki diki, izvo zvasiiwa padivi, izvo hazviite kuti zvishande kwandiri. Asi ini ndaifarira aesthetics yayo, asi kunyangwe zvakadaro haina kushanda, sekunge kuti inogona kunge iri Manjaro XFCE.
Chiri kundinetsa zvakanyanya ndechekuti iwe haugone kuwedzera mapfupi ekhibhodi, chete chinja izvo zvatove zvakagadzirirwa.
Kune zvimwe zvese, zvakanaka uye zvinomhanya chaizvo, chaizvo, mufaro uchienzaniswa neUbatana, Kde kana kunyange Xfce. Kune izvo zvega zvakatove zvakakodzera kushandisa.
Kana zviri zvekushandisa hapana dambudziko rakawanda, ese akaiswa pasina kuoma.
Zvakareruka, kumhanya uye isingaenzanisike maitiro ekuona.
Pindura kune Kuwanda
Mira uye bhatani rekudzikisira!?
Zvakanaka kuti dzimwe nguva unoderedza kubva panhare yepaneru asi kana uine mbeva pamusoro pechidzitiro iko kutambudzwa, unofanirwa kuenda pasi kudzikisa hwindo!?
Yakanaka, yakanyatsobatanidzwa uye kune mumwe munhu akaita sehanzvadzi yangu anoshandisa muchina nenzira yakapfava inokwana zvakakwana, asi isu takasiiwa "tine nzara": Maya (iyo kalendari) haienderane neGoogle Calendar kana neimwe sevhisi ... o_O Paunowana yako data mugore nenzira dzakasiyana, zvakakosha kuti uve nezvose zvakaenzanisirwa (mune yangu smartphone, iyo laptop kumba uye desktop pabasa), iyo desktop haisi kuzofa asi iro Cloud rinorerutsa hupenyu hwedu zvakanyanya.
Izvo zvakare zvinoramba zviine dambudziko rakafanana neUbuntus / Debian: kuve cyclical kuburitsa izere neyakare maapplication (GIMP 2.6? Huya pavanhu, ini ndinoshandisa 2.8.1 zvakanyanya uye ine zvakawanda zvinogadziridzwa izvo zvisipo muPrecise / GIMP elementaryOS). Zvinotaurwa naFrancesco nezvePPAs ndizvo chaizvo zvakandiendesa kure neUbuntu, paunotanga kuchinja zvikamu zvechirongwa zvinova zvisina kugadzikana uye iyo yekuvandudza irotari.
elementaryOS yakanaka kwazvo, hongu, asi kuwedzererwa kwezvimwe zvinhu kunoifuratira zvakanyanya.
Ini ndinobvumirana nezvibodzwa 6/10
Chikonzero cheMinimize bhatani ndechekuti maficha anofungidzirwa kuvhura nekuvhara nekukurumidza zvekuti kuvhura nekuvhara zvine maitiro akafanana nekuderedza. Ichokwadi kuti iwe unogona kudzikisira zvakananga pane doko icon, asi huya ..
gadza yekutanga tweaks nemushonga unoyera. unokwira imwezve poindi ...
Hechino chinongedzo chako kuti uwedzere bhatani rekudzikisa.
Ndinovimba haisi spam.
pEpE (@valdezpepe) akadaro
Kune avo vari kuyedza kuti vaone kana vachigara mune uku kugovera, ini ndinokurudzira kuenda kuburikidza: http://www.elementaryupdate.com/ uko iwe kwaunogona kuisa yekutanga elementOS nharaunda PPA iyo iwe yaunogona kuisa Elementary Tweak, Wingpanel Slim uye akasiyana madingindira kuti uzvigadzirise pakati pezvimwe zvinhu ...
Pindura PEpE (@valdezpepe)
Kutenda neWebhu, ini ndanga ndisingazvizive, inofanirwa kuiswa mupositi pachayo. Zvakawanda sekuderedza bhatani.
yakanaka kwazvo posvo ivo vakandiitira kuchengetedza nzvimbo pane yangu hard drive. 🙂
zvingave zvakanaka kuongororwa kwesolydxk mune yayo kde vhezheni ingafarire kwazvo
Ndakave nehukama hwakaomarara neyekutanga, kubva pakuchida kusvika pakuvenga. Kutsoropodza kwangu kwagara kwakanangana nekushomeka kwemagadzirirwo (ma icon, mbeva madingindira, matimu eGTK, nezvimwewo) nekuti ini ndinofunga kuti, pakati pezvimwe zvinhu, ndizvo zviri nezve Linux: kuita desktop ive yako; zvisinei, kutarisirwa mune aesthetics kunoita kuti ndide kuishandisa, kunyangwe iyo distro iri pachena zvakanyanya kutarisana nevashandisi veavice kupfuura shumba dzekare dzegungwa seni.
Parizvino ndakamhanyira mudambudziko rekuti kana ndikaedza kuisa skype, inoda kudzima nzvimbo yese yedesktop ...
Shandisa DPKG (kana ichisanganisira koni, hongu), uye nekudaro dzivisa kutumira iyo desktop yese kugehena.
Zvakanaka, ndakazviisa pasina dambudziko.
Uye ini, mushure mekugadzirisa kuti masisitoreti aive akaipa sei mune zvinyorwa zvangu.list .., Nechimwe chikonzero zvinyorwa zve ubuntu zvakadzokororwa.
Chokwadi ndechekuti ndaifara kwazvo pandakaona kuti eOS yakanga yatoburitswa, ndakafarirawo kuti vakaita ongororo nekukurumidza, ikozvino, ndine kusahadzika kwakati.
1) Ndeipi vhezheni yeUbuntu yakabva?
2) Ini ndinoshandisa Ubuntu zvakanyanya (kumba uye kubasa) .Iwe unokurudzira kuchinja kubva kuUbuntu kuenda kueOS?
Kwaziso mukuru, Patricio.
Pindura kuna Patrick
1- Nezve vhezheni 12.04 🙂
2- Kwandiri hongu.
1.- Ini zvirinani kuenderera na Wheezy uye ndoshandisa Ubuntu Server.
2.- Zvingave zvekuti ini ndinodhonza Elementary Shell PPA uye nekudaro rega yangu GNOME Kudonha zororo.
Chinhu chinomira pachena ndechekuti budiriro yekubatanidzwa kweiyo qt iri pamwe neyekutanga theme, izvo zvaive zvakanaka kwazvo.
Ini handifarire kuti iyo yakavakirwa pane gnome3, kunyangwe ichiratidzika kunge iri nani kupfuura gnome3. Dai ivo vaive vakavakirwa pane vanokwanisa kde yaigona kuiisa ... xd.
Mutongi 8) akadaro
Nezve Midori uye Flash, ndinoda kutaura kuti inofanirwa kuvhurwa mune ZVEMAZWI sarudzo.
Kubva pane zvaunotaura, dai iwe waiisa uye iwe ukatadza kuona mavhidhiyo kana kupenya mifananidzo muMidori, saka imhaka yekuti iwe wanga usina kuimaka seinoshanda mukuwedzera kweZVIDZIDZO.
Ndinokurudzira kuti iwe uyedze iyi yakaisvonaka browser kuedza. Yakareruka, yakapusa uye inokurumidza kwazvo. 😉
Pindura kuna jEsuSdA 8)
Yakanyorwa uye ini ndakatevera posvo http://www.elementaryupdate.com/2013/05/flash-in-midori-web-browser.html
Asi ini ndinowana kukanganisa uye hazvishande.
Ini zvirinani kuisa Iceweasel pairi kudzivirira matambudziko kuratidza HTML5 mavhidhiyo.
Kubva paLubuntu ??? Saka urikuti urikuti yakavakirwa paLXDE?
Zvakanaka ini ndakasiyana zvachose ... Elementary haina kuvakirwa paLXDE, pachokwadi ine Shell pamusoro peGnome 3.4 inonzi "Pantheon" uye pamwe chete nayo nhevedzano yezvishandiso zvakagadzirwa neElementary vanogadzira .. Asi ichiri Gnome 3.4 ine mbatya nyowani.
Uye zvakanaka, kana chimwe chezvinhu zvakandinyadzisa ndechekuti ndezvechinyakare zvakadii maererano nemapakeji ... kernel 3.2 a libreoffice 3.5 huy no no no ....
Mhinduro chete inosara ndeyekuti mapas aite kuti ive yakanaka, saka ndeipi pfungwa yekushandisa mapa kushandisa kernel kana package mune yayo yazvino vhezheni kana paine Ubuntu 13.04 ine yakagadziridzwa package?
Muchidimbu ... Vanhu vanoshandisa yekutanga kune zvinoonekwa kwete zvehunyanzvi, nekuti zvinoita sekunge kupusa kushandisa ppa kuve neyakawedzera package kana iwe uchigona kuisa nyore Lu, Xu, Ku, Ubuntu 13.04 kana 13.10 (kana iri nekukurumidza) uye unakirwe nenyika iripo yeLinux
Elementary OS ndiko kurota kwemwana wese weLinux…. kuti yako system yakafanana zvakanyanya sezvinobvira Mountais Shumba OS X
pufff ajajaj zviudze icho chorrera chevanhu vakaisa iyi distro nekuti inoratidzika kunge yakafanana neMAC
Zvakanaka, wangu wekare akada GNOME 3 kudonha uye ainyatsofa negodo paakaona kuti yakapusa sei Debian GNOMe 3.4.
Um ... akati aishandisa iyo Lubuntu distro kwete kuti eOS yakavakirwa paLubuntu
Ichokwadi !! Ini ndakanga ndisina kuona ... ndakaverenga nekukurumidza uye ndikanzwisisa kuti aiti zvekutanga zvaive pamusoro paLubuntu xD ahahahaha
ndine hurombo !!
Uye nekuti Lubuntu (mumaonero angu) ndiyo yakanyanya kugadzikana flavour yemhuri yeUbuntu, hapana matambudziko zvachose
ok waregererwa ahahaha!
Wakaverenga here chinyorwa XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? Ndati ndiri kushandisa lubuntu…, kwete icho chekutanga chinobva pane lubuntu.
Nenzira iyo hapana anoshandisa Mushandisi Agent sepakutanga….
Ini ndinongoona isina chrome marogo neTux padivi payo xD
Ahaha pakupedzisira vanhu vakaneta nekugadzirisa mushandisi mumiririri XD
Ehe, uye pakupera kwezuva iro kuwedzera kwavakaratidza ikoko kweChrome kunoshanda nemazvo, chinhu chakashata chete ndechekuti kana iwe ukavhura Gmail haivhure, saka unofanirwa kudzima kuwedzerwa kuti ugone kuisa yako email account ahahahahaha
Ini ndoda kugara seizvi ...
Kunyangwe paine panofanirwa kuve nesarudzo iri nani pane ino saiti kwaunogona graphical kusarudza iyo distro iyo iwe yaunoda kuoneka mumushandisi mumiririri.
Kwete, haina kutaura chero kupi kuti yaive yakavakirwa paLXDE. Kune rimwe divi Ubuntu 12.04 ndeye LTS iyo inopa kumwe kugadzikana, muchokwadi ndinofunga kuti pasuru yayo yakafanana neiyo Wheezy yazvino, zvisinei chokwadi ichi hachititadzise isu kuda kuisa mapakeji matsva, kungave nekuda kwekudikanwa kana nekuda kweiyo versionitis Icho chokwadi ndechekuti kune izvo kune mapas kana backports zvakateerana, izvo zvinokupa iwe mapakeji nyowani pasina kumbobayira kugadzikana, kunyanya kana iwe uine nharaunda inogadzira
Debian Wheezy inonyanya kusanduka maererano nemapakeji nyowani (kunze kwekunge yaiswa Steam, hongu).
Chinyorwa chakanaka "
Ini zvakare ndoda kuwedzera kuti Sabayon 13.08 yakaburitswawo
Iyo inouya nekernel 3.10.4, GNOME 3.8.4, KDE 4.10.5, MATE 1.6.2, Xfce 4.10, LibreOffice 4.1, systemd sekutanga kwekutanga, inogadziriswa neEFIBoot, nezvimwe.
Iyo tsamba mutengi inondiyeuchidza nezveThunderbird chete yakapusa hehehe
Sei iwe usingakwanise kushandura huwandu hwekushanduka muTerminal usingapfuure nepuraimariupdate.com!?
Ini ndakanaka nekupa kugoverwa kwakamonyoroka twist, asi _ kubvisa kugona kugadzirisa iyo system_ yevashandisi vemagetsi ndeye bullshit.
Ini ndinofunga Xfce inomhanya nekukurumidza uye kutsetseka kupfuura Elementary, zvirinani paManjaro naDebian zvinova zvandinoshandisa. Zvinotaridza kwandiri kuti iyi distro inounza dhizaini uye zvishoma zvishoma chimwe chinhu. Iyo yandaikurudzira kune vashandisi vatsva ndeye Voyager = http://voyager.legtux.org/ , yakavakirwa paXubuntu, kunze kwekuve akanaka kwazvo, inobatsira uye inoshanda, izvo zvekutanga zvinoita senge kwandiri.
Pfungwa yaakandipa ndeyekuti yakafanana neyechigadzirwa cheindasitiri, yakarongedzwa chaizvo uye inokwezva, asi mushure mekuishandisa inoodza moyo.
Sezvandareva mune zvimwe zvinyorwa, ini ndichapa ino sisitimu mukana, inoratidzika kunge yakanaka uye yakangwarira mumabatiro ayo ekuona.
Pindura kuna aioria
distro kuratidza novel kuti yakanaka sei linux inogona kutarisa ndima
Ini ndinofunga chinhu chega icho ElementaryOS chinoshaikwa kuve kopi yeOSX sezvakange zvakarongerwa naMwari ibha rekushandisa riri kumusoro kwepaneru 😀
Mubvunzo, nemaonero andinozviona, ndeekuti ... nei ichifanira kuve kopi? Ko iyo GNU / Linux haina kugadzirisika uye inochinjika zvakakwana kuti ugadzire kugovera nehunhu hwako wega?
Mhinduro yacho yakapusa, vanhu vazhinji vanofarira (neniwo), iro apuro rinotaridzika 😛
Hongu, hongu, izvo hazvina mubvunzo. Ini ndinodawo zvimwe zvinhu nezvechitarisiko cheMac, vamwe kwete. Sezvo ini ndichida mamwe mashoko eWin7, uye vamwe kwete.
Icho chokwadi ndechekuti, pakati pekuve ne "mweya", kana kufemerwa neMac, uye kuve kopi kunoenda kure nzira. Kuve kopi yechimwe chinhu chakatoitwa, pasina chaunopa, zvinoita kwandiri kunge kushomeka kukuru kwekugadzira.
Uye iyo kesi yeiyi distro, ndeyekuti chinenge chinhu chega chinopa ndechekuti, dhizaini, mune zvese zvimwe, zvishoma zvakanyanya chokwadi.
Izvo hazvina kushata zvakanyanya, izvo zvinoonekwa zveeOS zvinopa mweya weMAC OS X, asi iri kure zvakafanana.
Iyo yepamusoro bar haina chekuita nazvo, kana iwo ma icon, iwo ekuwedzera, ekuvhara mifananidzo, zvakanaka, ini ndinogona kuenderera uye kusapedza.
Nehunyanzvi hwakawanda vangadai vakagadzira nzvimbo yedesktop (seGnome, nemaapplication avo uye zvichingodaro), uye mhedzisiro yacho ingave iri nani.
Iwe ungadai wakaigadzikana ye2017 xD
Elementary ine yayo mashandisirwo: Ruzha, Pantheon-Mafaira, Kukanda, Maya, Pantheon-Terminal nevamwe, pamwe neMidori neGeary zvakanamatira kuchikwata cheElementary, saka hazvisi chete chitarisiko asi ivo vari kunyatso kuisa zvakawanda mariri.
Pindura kuna elruiz1993
Ichokwadi ndechekuti, uye ini handina kumbozvitaura kare, ndezvekuti ini shit kuti distro kana Shell haina kuunza iwo matatu mabhatani mumahwindo aine mvumo kana chiremera mutsika izvo izvi zveElementary kana Gnome Shell zvakavabvisa?
Mac OS X, Windows, KDE, Xfce, Cinnamon nezvimwe zvakadaro hazvine mabhatani matatu pane windows?
Hapana chimwe chinopfuura icho, chekusabatanidza iwo matatu mabhatani seyakajairwa, ini handichadi Elementary kana Gnome Shell, uye usandiudze kuti zvinosvika pane pee, ndinoziva, zvandiri kutaura ndezvekuti haufanire kuzvibvisa .
Kunyangwe yangu GNOME 3.4 Kudonha ine matatu mabhatani. Husimbe hwakadii hwevagadziri veElemantary OS.
Puff hongu !! Kuenda kumaTweaks uye kusarudza bhatani dhizaini kunotora nguva….
Haisi yemunhu wese ... izvi kubva kupuraimari zvakapenga!
Charlie E. Liarson akadaro
Kunyangwe nehurema hwezvikumbiro, iyo sisitimu inoita senge yakakwana kwandiri, ndinofara nazvo. Iwo mabhugi uye kushomeka kwemashoko mune izvo zvinoshandiswa, ini ndinozviona sekurudziro yekuronga. Ini ndinonyatsoiona iri rakanakisa tafura yemalaptop uye neyepamusha, uye zvebasa hazvina kushata zvachose. Iyo yakagadzikana, inokurumidza, yakapusa, yakajeka, yakachena uye yakanaka. Ini ndinofunga ndichave ndinofara kwazvo neElementary OS yeakasara egore uye muna2014.
Pindura kuna Charlie E. Liarson
Zviripachena, hazvigone kufarirwa nemunhu wese. Zvinoita sekunge kwandiri kuedza kunofanira kuomberwa: kuwana desktop iyo yavakasarudza iri nyore, asi mukugovera iyo kune "akajairika" mushandisi inopfuura zvakakwana. Pane chimwe chinhu chekukorobha, asi ivo vawana yavo yavo maitiro ... .. kugovera kupi, kunze kweUbuntu, kunogona kutaura zvakafanana?. Mhosva ndeyekuti vatangisa imba padenga, zvine musoro vachivimba neyakavakirwa Ubuntu base yakatove yapera (dai yakabuda ichienderana neiyo, zvaisazova zvinomhura). Chinhu chakakosha ndechekuti chinhu chakaomesesa chaitwa. Iye zvino vashandisi chete varikushaikwa (chichava chimwe chemazano munharaunda yangu) uye kuenda kupora nekuvandudza zvinhu. Zvichida mune iri kure kure ramangwana rinogona kuve rakavakirwa paArch kana Debian Kwayedza. Ini ndinofungidzira ivo vatamba zvakachengeteka zvichibva paiyi vhezheni yeUbuntu. Luck.
Kune yangu chikamu, dai paine imwe mhando yekukurumidza switch yekuchinjisa kune yakachena Gnome Shell kuti ive nyore, ini ndaizoishandisa zvechokwadi. Iyo ramangwana ichataura, asi kwete zvachose. Iyo Gnome 3 nyowani yekushandisa suite yakasimba kwazvo.
Kwandiri kuedza kwekugovera kuti ndiwane nharaunda yakanyatsobatanidzwa kunofanirwa kuve kwakakosha. Kuti yega yega yega icon yemasikirwo uye mashandisirwo anoenderana uye kwete kupokana uye ese ari pane yako saiti odyssey iyo mushandisi yaanofanira kushanda pairi. Uye hazvifanirwe kunge zvakadaro. Ndosaka ndichifarira Gnome, nekuti zvinoita kwandiri kunge ndiyo inobvumidza kwazvo uye munzira, nhevedzano yezvishandiso zvakabatanidzwa zvakakwana…. ndosaka ndaigona kubheja pane distro yangu ndega. Handizivi nezvako…. asi zvinondinetsa kuti, kunyangwe hazvo icon yacho irinani, unogara uchitsvaga mumwe munhu anoimba…. kana kubhurawuza matumbu eiyo distro kuti uwane maikoni kubva kune imwe nguva vhezheni mushure mechinyorwa. Kunyange Windows haina hanya neizvi. Apple mhando poindi.
«Kwandiri kuedza kwekugovera kuti ndiwane nharaunda yakanyatsobatanidzwa kunofanirwa kuve kwakakosha. "Kuti rimwe nerimwe remaitiro nemifananidzo yekushandisa zvinowirirana kwete kupesana uye kuti zvese zviri munzvimbo yazvo isimba rinofanira kushandirwa nemushandisi."
Ini ndinobvuma, ndicho chimwe chezvikonzero izvo zvaigara zvichindinetsa nezve iyo GNU + Linux distros, iyo iri kuvandudzwa nemakodhi havana hanya nezai maitiro avo, mune ino chikamu uye mukubatana pakati pekushandisa (Granite, nezvimwewo) iri uko kugovera kunopenya chaizvo.
Chero bedzi vachizviita paArch kana paDebian zvinogona kunge zvisina kukosha, kana ndisina kukanganisa muArch _vanonyatsoda iyo yekutanga desktop_ uye chinhu chega chavaive vakamirira kuzara chiteshi ndechekuti isvike pakadzikama, handizive kuti vachazviita sei Bata neGTK3 kutsamira kweshanduro dzakasiyana asi kana vachigona kuti ishande chinangwa chikuru great
Ndinoda kutanga. Ivo vanoedza kuzvipatsanura ivo kubva ku "bhizinesi senguva dzose" muLinux distros, asi zviri pachena kuti ivo vanogadzira kupfuura varongi.
Yakanaka kwazvo, kunyangwe isingapfuuri gNewSense mu obsolescence, kuti yazvino vhezheni yacho yakavakirwa pa Debian Squeeze.
Nenzira imwecheteyo, ndiro rakakura uye rakanakisa ganda randakaona kusvika parizvino, kunyangwe ini ndichisarudza kuramba ndichishandisa kudzoka kweGNOME 3.4 yangu yandinayo mu Wheezy.
Icho hachisi chinhu. Iyo GNOME 3.8 / 3.10 Nautilus ndiyo yandinovenga zvakanyanya, sezvo ini ndisingakwanise kushandisa bar yemenu iyo inondibvumidza kuti ndiende kusarudzo dzepamberi.
Nezve iyo 3 bhatani, ndinokutsigira nemoyo wese.
Handisati ndambofarira iyi distro, asi ini ndichiri kuishuvira rombo rakanaka uye ndinovimba inounza vanhu padyo neLinux nyika pamwe neUbuntu.
Vakomana, ini, kana ndiri akatendeseka, mumaonero angu Elementary OS Luna, ndizvo zvandaitarisira neBuntu 10.04 ... panzvimbo peUbatanidzwa. Kubatana, izvi zvakanaka kwazvo ... kana iwe uine yakanaka komputa, ine simba uye yazvino ... asi kana komputa yako iri yepakati kana yakaderera gamma, pf ... hapana chirevo.
Vazhinji vanogunun'una nezvekuti zvirongwa zvavo zvinosanganisirwa ndezvekare zvakadii, asi kana tikazvienzanisa neNewNewsense, vazhinji vachabvisa zvakataurwa sezvo vhezheni itsva yeiyo distro yakavakirwa paDebian Squeeze, saka icho hachisi chinhu.
Iyo nharaunda pachayo yakanyatsogadzikana.
Izvo zvinowanzokundikana mamwe mafomu. Iyo yefaira browser harina zvishoma (kunyange hazvo yakavandudza zvakanyanya).
Zvirinani iro bhurawuza refaira rine zvimwe zvinhu kupfuura iyo yazvino GNOME 3.10 Nautilus.
Asi Nautilus anogona kutakura zvishoma zvinhu? MuGnome 3.8 ndaifanira kuitsiva naNemo nekuti hapana chaigona kuitwa nacho.
Kana iri Elementary, yakanaka kwazvo uye yakapusa asi kuishandisa ini ndinoisa Ubuntu kana akasiyana ayo uye ini ndinowana mhedzisiro yakafanana nekuchinja mafonti, mifananidzo, dingindira nedoko.
Ini handizive, ini ndoda yakawanda yakawanda kugunun'una kuti compiz .., chete nekuda kwechikonzero icho handaizo gadza ubuntu.
Ini ndinoshandisa GNOME 3.4 kudonha kwakauya kwandiri muDebian Wheezy, uye iyo Nautilus ichiri kubatsira.
Ini ndinofunga kuti kuonekera kwerudzi urwu rwema distros, kwakanangidzirwa zvakanyanya pa "mushandisi ruzivo" (chepuraimari, chakra, nezvimwewo) zvinoratidza kuti hwaro (kernel, maraibhurari, nezvimwewo) zveGnu / Linux zvakagadzirirwa zvakakwana kuti vamwe vave Zvipire chete kune "zvepamusoro", ndinozviona sechiratidzo chakanakisa, ecosystem iri mune hutano hwakanaka. Zvido.
Pindura Mr Black
Jekesa dzimwe nyaya dzakabuda:
-Kugovaniswa kwacho kwakanyanya kudarika izvo zvinoda vanogadzira, asi zvirinani kutanga zvishoma uye kukura pane kuyedza kugadzira hofori uye usatombopedza. Nekuda kwechinyorwa, Geary chirongwa chetsamba chinogadzirwa naJorba, kwete ivo vanogadzira Elementary. Kutsvaga kwakarongerwa inotevera vhezheni yechirongwa, asi ivo vari kuenda ivo vamene kumhanya.
-Vagadziri vanoziva kuti maraibhurari ndeekare, haavanze kuti vanofarira Arch uye mamwe acho anobatsirawo kuArch.
-Zvino yakashoropodzwa zvakanyanya nekuda kwekureruka, asi iri hwaro, inotevera ichave iri nani uye mugore kana maviri Ubuntu achazungunusa.
Inonakidza Unofarira Arch here? Zvingave zvakanaka sei kana vakagadzira Elementary Chemhondoro Manjaro, kureva Arch asi iine nyore kuisa uye nevamwe 😀
… Kune imi mose, mazwi akasarudzika kubva kunaDebian uyo akaona chiedza, hama! xD
Ndiri kuzoita kupenda neayo mazwi ako 😀
Kana Arch vagadziri vakaita fomu -style simaki seOpenBSD, chingave chikonzero chikuru chekuisa Arch.Parizvino, ini ndichiri kuyedza nemuchina chaiwo.
Shandisa izvi uye enda:
dzinofamba nenzira dzadzo
Ini handipikise izvo ..., pane snail mwero xD
Gore kana maviri ayo ubunut anodedera ..., chokwadi, kunyangwe usingave mushandisi wehunhu uye uchiona iyo ubuntu inodhonza yakananga kumir uye nekubatana kutsva, ndinokahadzika kuti distro iyi inogona kupfuura Ubuntu, ichave iri imwe yakanakisa linux mint asi hapana chimwezve.
Ndanga ndichiishandisa kwemazuva mana uye kusvika pari zvino zvese zviri kushanda nemazvo. Ini ndinozvisuwa uye sekuziva kwangu ivo vatyairi vanoshanda vanofanirwa kushanda zvirinani pane vemahara asi mune ino distro zvakapesana uye zvinondifadza 🙂
Zvinoitika kwandiri zvakafanana nezvako, madhiraivha ane kodzero anouraya kwandiri, kune rimwe divi iwo akasununguka akanaka.
«Chekutanga pane zvese isu tinowana iyo Desktop Nzvimbo, yakachena, yakanaka uye yakapusa, yakafanana chaizvo neiyo yeMac OSX.
Parizvino zvese zvakanaka pane live cd, kusvikira iwe waona kuti yako Hardware haina kunyatsotsigirwa neKernel 3.2 uye tafura 8, saka ndakatanga kuisa distro uye ndoshandisa xorg edgers ppa kuva netafura yazvino, uye Kernel 3.11 kubva kuUbuntu Kernels ppa. »
Isa aya maviri matanho akareruka uye mhedzisiro yacho inoshamisa ... iyo system inobhururuka ... Nhunzi ... hongu, ndakaita zvimwe zvigadziriso, kubvisa zvimwe zvinokanganisa, nezvimwe ...
Ndanga ndichimhanya neDebian kweanopfuura makore mashanu (inogara yakagadzikana), asi palaptop ini ndanga ndichimhanya hafu inononoka (gnome shell) saka ndakafunga kuyedza kuti ndione maitiro ayo uye chokwadi ndechekuti ndaichifarira zvakanyanya, zvese kumhanya, kupenya kwaro uye kunyatso chenjera kweiyo interface. Zvino chiise paPC, ngatione kana chiri chekupedzisira.
PS: chandisingakwanise kuwana ndeyekugadzirisa mamenyu eApplications, sekubvisa kana kushandura chikamu chechirongwa, kana paine anoziva….
Mune yangu kesi, ini ndanga ndisingade kuchinja kernel kana vhidhiyo stack, kunyangwe ini ndaigona kuyedza kuidzokorora kuti ndione zvinoitika.
Zvino izvo zvandino funga zvakakosha mukushandisa kwemazuva ese kuwedzera aya maPPA:
j: 0 ~> ls /etc/apt/source.list.d/
birdie-timu-yakagadzikana-chaiyo.list yekutanga.list.save loneowais-fogger-chaiyo.list zvigamba.list.save zvinoshanduka-elementary-update-precise.list.save
birdie-team-stable-precise.list.save erasmo-marin-photo-daily-builds-precise.list loneowais-fogger-precise.list.save sgringwe-rdio-precise.list webupd8team-tribler-precise.list
caffeine-Developers-ppa-chaiyo.list erasmo-marin-foto-daily-builds-precise.list.save nilarimogard-webupd8-precise.list sgringwe-rdio-precise.list.save webupd8team-tribler-precise.list.save
caffeine-developers-ppa-precise.list.save google-chrome.list nilarimogard-webupd8-precise.list.save shnatsel-dnscrypt-precise.list webupd8team-y-ppa-manager-precise.list
cassou-emacs-precise.list google-chrome.list.save nuvola-player-builders-stable-precise.list tombeckmann-ppa-precise.list webupd8team-y-ppa-manager-precise.list.save
cassou-emacs-precise.list.save inkscape_dev-stable-precise.list nuvola-player-builders-stable-precise.list.save tombeckmann-ppa-precise.list.save
dkotrada-pomidor-chaiyo.list inkscape_dev-stable-precise.list.save otto-kesselgulasch-gimp-chaiyo.list transmissionbt-ppa-precise.list
dkotrada-pomidor-precise.list.save libreoffice-libreoffice-4-1-chaiyo.list otto-kesselgulasch-gimp-precise.list.save transmissionbt-ppa-precise.list.save
chepuraimari.list libreoffice-libreoffice-4-1-precise.list.save patches.list anokwanisa-epuraimendi-kugadzirisa-akananga.list
j: 0 ~>
Nezvo uye ese eOS haina chimiro chakanakira muoni uye ndaifanirwa kuisa Gwenview - inoyamwa…
Chinhu chekutanga chandakaita pandakachiisa kubvisa zvirongwa izvo zvinounza nekumisikidza uye kuisa iyo vlc, chrome, synaptic, thunderbird, dolphin uye Libreoffice 4 uye chokwadi ndechekuti ini ndanyanyisa kugutsikana
Pakati pezvinhu zvakawanda, inoshaya maneja wehwindo iyo inobvumidza kurangarira yapfuura chinzvimbo uye saizi yemavhure ekuvhura windows windows.
Ini ndinodzokorora: hapana faira rekutarisa iro rinokutendera iwe kuti uchinje iwo graphic mafaera, kune izvi iwe unofanirwa kushandisa GIMP, iyo yakaenzana nekuuraya nhunzi nesando.
Imwe nzira ndeye kushandisa rairo yekuraira (imagemagik, nezvimwewo) asi hazvo, zvinopesana zvakanangana nefilosofi yekushandisa uye chinangwa chevashandisi veeOS.
Mafaira anotaridzika zvakanyanya seAlfa pane yakasvibira uye, mukutendeseka kose, Dolphin inoratidza kugona kwayo kuzere kana ichishandiswa nekubatanidzwa kweNepomuk - kunyangwe isina kusangana kwakadaro ichiri yakanakisa graphical faira maneja pane chero chikuva.
Rimwe dambudziko rekunze reGNOME kana eOS windows maneja: patinowedzera bhukumaki muChannel / Chromium, sezvo sisitimu yacho isingayeuke saizi yemahwindo, iwe unofanirwa kuwedzera mabhukumaki hwindo nemaoko nguva dzese, mbichana.
Vateereri: inovavarira kutsiva Totem neyakajeka interface asi haina kana cheshanu chayo mashandiro - zvakare kuwedzeredza kunoshanda kunopesana.
Maitiro eKDE SC anonyanya kushanda: «tinokupa mukana wemataniyoni (ok, pamwe haazi akawanda kudaro), unogadzirisa chinongedzo sezvaunoda» kuitira kuti kana mumwe munhu achida chinongedzo chidiki vanogona kuva nacho pasina kurasikirwa neiyo simba rekushandisa, muEOS vanobvisa iwo maficha zvakananga nekuda kweiyo 'inodiwa' kurerutsa - kwete zvisina maturo maTweaks anouya kuzogadzirisa zvimwe zvezvikanganiso izvi.
Muenzaniso wekurerutsa ndeye Shotwell: inoshanda seyakagadzika giraidhi faira muoni, ine matani esarudzo dzakaomarara asi kwete iyo yekudzora mufananidzo - Yorba, ivo vanoyamwa !!!
Pantheon Terminal: Oversimplified terminal. Nei uchifanira kudzoreredza vhiri iwe uchinyatsogona kushandisa GNOME kana Xfce? Pamusoro pekuve kuvandudzwa kutsva hapana mukana wekuti uchinje mavara zviri nyore, mwero wekujekesa kana kugona kukamura skrini mumateminari akati wandei seYakuake kana Terminator.
Ehe, mavara anogona kuchinjwa uchishandisa dconf mune isingasviki nzira yeupenzi: https://gist.github.com/davidgomes/5162998
Pfungwa yeEOS inonakidza, iyo sisitimu yakajeka uye inokwezva kutarisisa kuri kubva paUbuntu, ine mazano akanaka (Wingpanel, Gazette) asi ichiri kuda kukura uye sevazhinji vanoti yakanangana nevasiri-makomputa vashandisi.
Muchiitiko changu, semuoni wemufananidzo, ndinoshandisa gthumb, ndakagadzirisa zvinowoneka zvechiteshi kubva ku dconf, maTweaks epakutanga haana kumbobvira andishandira, pamwe nekuti ndakabvisa maPantheon Mafaira, chimwe chinhu chandisingafanire, chokwadi, handichichidi panguva iyoyo kubvira kubata imwe faira uye zvese zviri sezvandinoda
jesu jimenez akadaro
Mhoro shamwari, ini ndakatanga ne linux ne fedora 14 distro uye ndakagara kusvika 17 mushure meizvozvo ndaive nematambudziko mazhinji nekadhi kangu kemifananidzo uye nekunonoka kwakawanda, mushure meizvozvo ndakafunga kuyedza ubuntu uye kwete, kwaive kukanganisa, zvirinani kuti ndienderere mberi windows 7. Iye zvino ndinodzokera ku linux nefedora 19 uye kwete, mhedzisiro yacho inononoka uye inondibata, matambudziko eprinta ayo mushure mekuedza kwakawanda kwekumisikidza ndaigona kupurinda. Ndiri kuenda kuUbuntu 13.04 uye inoenda nekukurumidza uye ndinoifarira asi ndichiona mavhidhiyo ini ndichiona iyi distro Elementary os luna, yaive mubeta uye musi wandakarodhaunirodha, iyo yaive mambakwedza, yanga yatogadzikana. Ndakaiisa uye haina kundipa giraidhi kadhi matambudziko, zvaive nyore kuisa adobe flash player uye ndakaona kuti iyo midori browser ye 64 bits haina kushanda kuona mavhidhiyo uye ikozvino ndinoifarira, ndinotarisa mavhidhiyo, ini ndinogadzirisa sisitimu, ndinoita mabasa uye zvese zviri kukurumidza, Handisi kuzotaura kuti ndiyo yakanakisa, asi iyo OS ichiri kushaya yakawanda asi parizvino ndiri kuita zvakanaka kwazvo. Ndinovimba uye ndinovandudza, kwaziso shamwari.
Pindura kuna Jesu jimenez
Mhoroi, ini ndine yangu yekutanga uye ndakagutsikana, asi mumwe munhu anogona kunditsanangudza maitiro ekuwedzera iyo ppa yekuvandudza kernel
kukwazisa uye kuvonga
Haisi ppa, kana uchifanira kuenda kubuntu mainline kernel, tsvaga chikamu chezuva nezuva, uye kurodha pasi kernel mahedhiyo misoro generic, amd64 uye kernel generic nezvimwewo wozoisa iwo 1 ne1
Ini, mushandisi wekupedzisira ... newbie kune linux, ndinongoti ... ndinotenda zvikuru nekuyedza kukuru, nguva uye kuzvipira kuti vanhu vakaita sevakomana kubva kune ino uye chero distro vanoshandisa pamwe vasina muripo wemari, kuyedza kuita linux chimwe chinhu. inokwezva uye inoshanda kune vanhuwo zvavo ... asi ini zvakare ndinoona kuti vangani vanhu VANOSHORA uye KUSVIRA basa ravo; pachinzvimbo chekutenda nekusimbisa zvinhu zvakanaka zvakawanda zvine maSystem avo, kuti pakupedzisira, senge 95% kana kupfuura, kana pamwe hapana munhu anokwanisa kutora mashoma emabhiri KUSVIRA kune iyi mhando yekuedza ... uye sezvandambotaura pakutanga Kunyangwe mune yangu novice Linux chiratidzo uye neese kusaziva pane iyi nyaya, ini ndinogona kungoti «Yakanaka sei Elementary! Ichangoburwa kubva kuManjaro inoshamisa !!, »Yakanyanya sinamoni ine Linux Mint !! Debian ndiye Debian !!! wandinoda distro !! kana izvo chero munhu anogona kutaura nezve yavo distro ... pachinzvimbo chekupopota sevasikana kana kunyunyuta zvakanyanya nezve iro rakaipa basa rekutsvaga hurema !! dai zvaive sekushoropodza kunovaka saka gamuchirai vese! asi zvingave zvakanaka sei kubatsira vanhu ava kungave mune kodhi yekuvandudza chigadzirwa kana nezvimwe ... Kana zuva iro rasvika ndinofunga kuti Linux ichave iri, zvisinei nenhamba yedistros, iyo sisitimu inoshanda yakakwenenzverwa nenharaunda yayo ... Aya ndiwo maonero angu nezvazvo.
paul honorato akadaro
Paive pasina kana distro imwe yaishanda pabhuku rangu, vamwe vaizoisa asi mushure mekutanga / kudzima iyo graphical nharaunda yaizoenda, yakawanda kernel panics, pane vamwe ini anditadza kana kutanga. Nekutanga kwaive kwakapesana, zvese zvakashanda kekutanga, zvakatsiga uye unogona kushanda nazvo. Ini ndakaisa netbeans, geany, gdebi, virtualbox, chromium, libreoffice uye ndakafunga kuti izvi zvaizotyora kuiswa, asi kwete. Zvese sezvazvinofanira kuve.
Pindura Pablo Honorato
Mhoroi, ndakaiisa uye ndinoida, yakashongedzwa, yakajeka, inokurumidza, chinhu chega "chakaipa" kuisa zvese zvinoshandiswa zvaunoda, uye chimwe chinhu kana zvichindinetsa zvishoma, ndechekuti unobatanidza pendrive kana rekunze disk kuburikidza neUSB uye Izvo hazvisimudzi otomatiki, zvikasadaro zvinoshanda zvakakwana, ahhh uye ini ndaifanirwa kuita bhuku rekugadzirisa kuitira kuti rione foni yangu
Ini ndinoda iyi distro. Ndine xubuntu + compiz partition, mune imwe LMDE uye kana ndichishandisa eOs ndinonzwa chaizvo kuti muchina unobhururuka. Izvo zvinonyanya kubatsira kana iwe uchida kushanda uye kuti zvinhu zviitwe nekukurumidza. Ehe inoshaya zvinhu izvo munhu anorasikirwa nazvo, asi ini ndinovimba kuti nerutsigiro rwemunhu wese, chirongwa ichi chinokura, mumaonero angu, yakanakisa distro yandakaedza maererano nekuita kweNotbook rangu (TM2, i3, 4MBRAM)
Mhoroi vanhu vese. Chekutanga pane zvese, maita basa nesaiti ino yakawedzera maonero angu pane Elementary OS Luna. Ndakagara ndiri mushandisi izere we windows kubvira pandinoshanda nehunyanzvi software iyo pamwe nekuda kwekushayikwa kwezivo kana kuramba kushanduka kana nekuda kweicho chaicho chinangwa, ndakafunga kuti vanondiunzira zvisingakwanisike kana ndichishanda. Nekudaro, ini ndiri mudiwa wenzvimbo yekushandira inodziya nekuti pandinovhura PC yangu, inova ndiyo kutanga kwebasa rangu, ndiri wekufunga kuti chinhu chekutanga chandinoona pamberi pameso angu chinofanira kugadzira rudo runonakidza rwechiratidzo uye nemanzwiro. Kubva pane zvandakaverenga pano, Elementary OS Luna angaite senge godend nezvazvo uye ndinoda kuyedza. Ndine kusahadzika pamusoro pemaitiro ekubata madhiraivhu epc paunenge uchiisa iyo OS sezvo ini ndichiona kuti hapana munhu abata nyaya iyi. Kana mumwe munhu achigona kundibatsira neizvi kana nechinhu chero chipi zvacho chine chekuita nenyaya iyi, ndingafare kwazvo nezvazvo. Rangarira kuti ini handisati ndamboshanda munyika yeGNU / Linux uye kuti ini ndoda kutora Elementary OS Luna sedanho rekutanga.
Pindura kuna LEGOLAS
Samba: Yakamira Server paDebian
Kuisa TLP paArch Linux